Waxyaabaha : Birta kaarboon
Goobta Asalka : Yangzhou
Dhererka Shaqada : 10m
Dhererka tuubada : 1.7m
Faahfaahinta : 48
Kala duwan : Sallaan dhigin Meegaarka Wide
Nooca : Disck suckle
Scaffold waxaa loola jeedaa jaranjarooyin kala duwan oo laga dhisay goobta dhismaha si ay shaqaaluhu u shaqeeyaan una xalliyaan gaadiidka qumman iyo kan tooska ah. Ereyga guud ee warshadaha dhismaha, waxaa loola jeedaa adeegsiga darbiyada dibadda, qurxinta gudaha ama dabaqyada sare ee goobaha dhismaha oo aan si toos ah loo dhisi karin. Badanaa shaqaalaha dhismaha si ay kor iyo hoos ugu shaqeeyaan ama u ilaaliyaan shabakadda badbaadada dibadda iyo rakibidda joogga sare ee qaybaha. Si aad si cad u sheegto, waa in la dhisaa qalfoof.
Waxaa lagu sameeyay alaab ceeriin oo tayo sare leh si loo hubiyo isku halaynta badeecada la dhammeeyay.
Qalabka wax -soo -saarka casriga ah oo leh tiknoolajiyadda alxanka sare.
Saxanka birta ee lugaynta
Awoodda Wax -soo -saarka: 300000 Tan sanadkiiba
Shuruudaha Bixinta: L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, Gram Money
Ringlock scaffolding waa mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee qaab -dhismeedyada adduunka. Maadaama uu yahay nidaam wax -ka -beddelidda qaybsan, badeecaddu waxay leedahay hawlo dhammaystiran iyo adeegsiyo baaxad leh.
Saldhigga jaakadaha daboolidda iyo jaakada U-madaxa waxay ka kooban yihiin tuubooyin dunta aan xuduud lahayn, Q235 lowska birta ah iyo taargooyinka.
Badeecaddan waxaa loo isticmaali karaa dhammaan noocyada kala -soocidda, iyo is -dul -saarku waa sahlan yahay in si siman loogu xiro.
Waxaa laga sameeyay Q235 bir-kaarboon-hooseeya, saldhigga jaakadaha daboolista ee la isku hagaajin karo iyo jaakada U-qaabeysan waxay qaadi kartaa culeys ka badan 100KN.
Goobta Asalka: Yangzhou
Dhererka Shaqada: 10m
Dhererka tuubada: 1.7m
Ringlock waa nidaam isku-dhafan oo ujeeddo badan leh oo la xaqiijiyay oo ku habboon dhammaan qaababka helitaanka iyo dhismayaasha taageerada ee warshadaha dhismaha, dayactirka derbiga dibadda, dhismaha badda, viaducts, iwm.
Kala duwan: Sallaan dhigin Meegaarka Wide